Waa Hormadii ama kooxdii ka baxay Hargeisa Technical Institute 1966kii. Waa hormadii (Dufcaddii) sadaxad ee gashay Dugsigaa Farsamada. Fasalkaasi wuxu ka koobnaa 13 arday. Wuxu ahaa fasalkii ugu horreeyey uguna dambeyey ee qaata shahadadda “City & Guilds of London Institute”. Kooxdani sidii ay u dhammayd ayaa loo wada diray Midowgii Soofiyeti 1966kii. Intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, inta noolna caafimaad ha siiyo, Aammiinta nagu dara.Wixi dhintay Allahu Naxaristo. Wixi nool na ilahay cafimaad ha siiyo.
← Madaxweyne Aadan Cabdile Cusman Oo Codsanaya In Soomaaliya La Ictiraafo July 1960
Boobe Yuusuf Ducaale Oo Ka Hadlay Khilaafka Golaha Wakiilada →